Rubatsiro muto - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Soupu36 maminitsi4 vanhu
kubudikidza Hunhu González
Ndine mukomana mudiki akaipa, uye anga asingade kudya. Ndakanga ndapererwa uye ndakanga ndisingazive chekumupa kwekudya kwemanheru. Saka zvakaitika kwandiri kuti ndipe muto nemaoodles akanaka, anochida.
Ndinogara ndine chirongo mufiriji asi ndanga ndisina nhasi. Saka ndakamhanyira kusupamaketi, ndikatenga imwe hake y mumaminitsi asingasviki makumi maviri Ndakanga ndakagadzirira muto uyu, waakadya zvinoshamisa.
Ndinotora mukana uno kukutendai nekugamuchirwa kwenyu. Chokwadi ndechekuti ini ndine imwe vertigo, sezvo ichi chiri yakasimbiswa blog uye nevanyanzvi vaviri vakaita saSilvia naElena. Izvo zvandinofunga sevadzidzisi vangu. Elena asiya mukaha mukuru, wandisingafungire kuzadza. Iye anotya kubika, uye ini ndiri hobbyist. Tine zvitaera zvakasiyana, saka ini handidi kuitsiva zvachose. Ini ndinongovimba iwe unofarira mabikirwo angu.
1 Sopu muto
Sevha ino yekubheka
Ndokumbira utore kuti uchengete
Nemimwe miriwo uye hake diki iwe unenge uine muto wakakura.
Recipe mhando: masobho
Kubika nguva: 36M
Nguva yakazara: 36M
hake 400 g (approx) (musoro, zvidimbu zvakakura, nezvimwewo)
Isu tinogadzira miriwo uye tinoidururira muhari, kupwanya Masekonzi mashanu, kumhanya 10.
Isu tinoisa dengu uye toisa hove uye tifukidze nemvura. (Anenge ma2 litita. Izvo zvinodikanwa kuti utarise mucherechedzo wehukuru hwekugona kwegirazi).
Isu tinoronga Maminetsi matanhatu, 35º, kumhanya 100
Kana tapedza, tinobvisa dengu nehove.
Kana isu tichida muto nekuwedzera kusagadzikana, isu tinongofanirwa kukuya miriwo pamwe chete nemuto muto 1 miniti kumhanya 5.
Mamwe mashoko - Hake nemapatatisi
Chinja iyi yekubheka kune yako Thermomix® modhi
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Asingasviki 1 awa, Hove, Mapepa evana, Soup uye mafuta
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Zvenguva » Asingasviki 1 awa » Sopu muto
Begoña Gongora akadaro
Yakanaka maresipi nzira, nayo iyo vana vangu svutugadzike. Ndinogara ndichigadzira nenyama, imwe nzira yekudya hove.
Pindura Begoña Góngora
Yolanda ruiz garcia akadaro
Ndiri kunyora pasi iyi nzira, zviri nyore kwazvo, nemidziyo yaunogara uine pamba uye yenguva senge yemwana wako, gumi !!!! Makorokoto.
Ndinovimba mwana wako atove, kunge ruva. kutsvoda kwamuri mese !!!!
Pindura Yolanda Ruiz Garcia
Zano rakazonaka Unhu ……. waita hako . Zvakanaka kune vekudya ...
Iyo yakakura yekubheka ndinokutendai zvakanyanya uye kuti iyo diki inova nani :))
Mhoroi Vhunhu, chekutanga pane zvese kugamuchirwa uye muto unotaridzika zvakanaka, ingokumbira iwe kuti wakaisa manhanga zvakadii. Ndatenda
Hunhu González akadaro
Ndatenda wakanaka, ini ndaisa chidimbu chidiki pairi, handizive kuti ingarema zvakadii asi ndinofunga 100gr, haina kusvika. Nekuti iro zano nderekuti harikurumidze kuwanda, ndiko kuti, pakupedzisira ndakapwanya zvese kuita kuti zvinyatsoenderana, asi nekugadzirwa kwemuto kuti ndikwanise kuwedzera fideitos.
Pindura kuna Virtudes González
shred zvese kunze kwehove, ndiko kuti, miriwo yese.
Ndatenda zvikuru nerapeepe;
Ini handinzwisise chinhu chimwe: Kana ndikaburitsa hove mubhasikiti, iwe unofanirwa kusevha muto usina hove, handiti?
Hove iya inoenda mundiro yepiri kana chii chinoitika kwazviri?
Hi Mario, chinhu chikuru mundiro iyi muto, unogona kutora zvidimbu zve hake kana musoro. Kana iwe ukashandisa musoro, zvino izvo zvinokandirwa kure uye kana iwe ukashandisa zvidimbu zve hake, saka unogona kuzvitora sechinhu chinowirirana nemuto, kana kuushandisa mune mamwe mabikirwo, makoketi, omelette, nezvimwe ...
Kumba isu tiri muto tureens uye uno muto unotaridzika nyore uye unonaka panguva imwe chete.
Kudya uku kuchada mukomana wangu mudiki, anowedzera chipunu.Thank you Virtues.
mari carmen5 akadaro
Welcome to this blog !!! uye mabikirwo acho akanaka kwazvo kune isu tese sosi yehove iyi. Kwaziso
Pindura mari carmen5
Rose Kullström akadaro
Ndakaverenga kuti iwe une zvishoma zvakaipa. Haadi kudya ... usazvidya moyo nzara inogara ichipinda kana uchipora. Simba rekugaya chikafu rinoenda mukupora. Cherekedza mbwanana kana isiri kudya. Ndine urombo nekukupa ichi chiziviso asi unogona kutsvaga zvimwe zvinhu pamambure. Ndatenda
Pindura kuna Rosa Kullstrom
Hunhu hunoratidzika kunge hunonaka uye hunoita kuti zvive nyore! Rega mwana wako ave nani!
Pindura kuna Piluka
Mhoro Hunhu, muto unonakidza kwazvo.
Rega mwana wako ave nani.
Ah tinogamuchirwa kune ino blog uye makorokoto pane ako mapheka
Maria Consuelo akadaro
Mhoroi hunhu hwakanaka, titambire nekutenda maresipi ako, ndinovimba kuti kuenda kwaSivia hakuna kukonzerwa nehurwere, uye kuti mwanakomana wako ave kuita nani, ndaida kukubvunza zvakafanana nemusikana, asi handina kuona mhinduro, ndine THER. 1 gore uye ndinoita sei kushandisa kupetwa kwepuni, ndatenda zvikuru.
Pindura Mª Consuelo
Mhoro nyaradzo, kutanga kwazvose nekutenda kwekugamuchirwa.
Ini ndinofungidzira kuti yako Tmx ine makumi maviri neshanu, chokwadi ndechekuti izvozvi handizive chaizvo kuti ingashandiswe sei, sezvo ini ndiri munhuwo zvake uye ndinenge ndichangotanga, handina kunge ndiine tmx yangu kwemakore maviri, asi ndichaedza Tsvaga.
Ndanga ndichizvitarisa painternet, uye muTmx 21, hazvidi spuni yekumhanyisa, iyo ingaenzana nekuisa mapurugufuru uye kumhanya 1.
Ini ndinokuyeuchidza kuti ini handisi nyanzvi, zvandakaita kuita katsvagurudzo padandemutande. Edza izvi neresipi yakapfava isingashandise zvakawanda zvinoshandiswa, kana zvichikukodzera, saka ramba uchigadzira mabikirwo nespeed spidhi. .
… Mazvita kunaka kweresipi iyi !!!! Ndinoyedza nemwanakomana wangu wedangwe (ane mwedzi makumi maviri nemaviri ekuberekwa)… ..Ndingafarire kuti imi muenderere mberi nekuisa mabikirwo evana !!!! …… ..ndatenda uye kutsvoda !!
Pindura kuna letizia
Letizia mwana wangu anobva zvakare muna 2009. Ndine maresipi emazamu uye madhiri anonaka evadiki. Vachada chikafu cheChipiri.
Ndinokutendai mose nekutambirwa uye ndinovimba kuti kana maedza mapureti, muchasiya pfungwa dzenyu, ndatenda futi. Mufaro ...
Nezuro manheru ndakazviedza pakudya kwemanheru kwemwanakomana wangu, uye chokwadi ndechekuti chakange chisina kujeka (ini handisati ndawana hang yemunyu muThermo), asi ndakazora miriwo nehove uye nenyeredzi pasita yakadya zvese .
Kutenda mapepeti akareruka!
Mhoro Meritxell, chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri nenyaya yemunyu. Asi zvese neThermomix, senge nechikafu chetsika, ndakazviitawo nezuro uye hazvisi zvekuti handina kuwana poindi yemunyu, ndeyekuti ndakaipotsa, ndakaigadzirisa nekamwe munyu wakanaka mundiro uye ndizvo ...
Kutanga titambire !!! Ndanga ndiri muteveri weblog rino kwerinenge gore, kubvira pandakatenga thermomix yangu uye ndinobvawo kuSeville.
Ndakagadzira muto uyu nezuro nezuro uye chokwadi ndechekuti wakanaka kwazvo, ini ndakatsiva zvidya zviviri zvehuku pane hake, uye chokwadi ndechekuti yakanaka kwazvo. Kutenda uye makorokoto !!
Pindura kuna AMPE
Ndatenda Ampe, ndichanyorera huku.
Ini ndinozviita zvakanyanya kupfuura chero chinhu kune mudiki, uye nekureruka uye nekukurumidza zviri. Ichowo muto unogona kushandiswa sehwaro hwekudya.
Zviyo zvine Feta chizi nemiriwo
Chinyorwa chenhengo dzese
Munguva pfupi yapfuura nhengo dzinoshanda
Karoti uye yogati keke
Almogrote gomero kana Canarian pate
Verdinas ine prawns